အောင်ဆန်းကိုလေးစားတဲ.လူထဲမှာ ကျွန်တော် မပါ ~ SAI SENG SERK
Home » MYOPINION » အောင်ဆန်းကိုလေးစားတဲ.လူထဲမှာ ကျွန်တော် မပါ
ကျွန်တော်မြန်မာပြည် ဗမာပြည်ကိုကြည်.လိုက်ရင် ခပ်များများက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အရမ်းချစ်ခင်လေးစားကြတယ်။အရမ်းလဲ ဂုဏ်ယူတယ် အရမ်းလဲလေးစားတယ် ဘာပဲလုပ်လုပ် ဆန္ဒပြ(demonstrate against)ရင်တောင်မှ ဗိုလ်ချုပ်ပုံမပါရင်မပြီးဘူး။ ခပ်များများ တိုင်းရင်းသားတွေလဲ ထိုနည်းတူစွာပဲ ဗိုလ်ချုပ်ကို အကြည်ညိုလေးစားတယ်။သူပာာ မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုကြီး လွတ်လပ်ရေးဖခင်လို.ပြောတယ်။တိုင်းရင်း သားတွေကိုလဲ သူက စည်းစည်းလုံးလုံး နဲ. လွတ်လပ်ရေးအတူရအောင် မြု ဆွယ်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်လို.ပြောကြတယ်။အေ .. ငါတော.ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်မယ် အောင်ဆန်း ကို လေးစားတဲ.လူထဲမှာ ငါမပါဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေကိုစည်းလုံးညီညာအောင်လဲသူလုပ် နိုင်တယ်တဲ.။ငါ.အတွက်တော. ဗိုလ်ချုပ် ညာပဲ အခုခေတ် စာရေးဆရာတွေက ရေးချင်သလိုရေး လျှောက်ရေးချင်သလိုရေး။သမိုင်းအမှန်ကိုမသိပဲနဲ. နာမည်ကြီးဖို.အတွက်ပဲလုပ်နေတာခပ်များများပဲ။ဒီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုတာ ငါတို.တိုင်းရင်းသားအတွက်မကောင်းဘူး ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်မယ်။ငါ.အတွက် ဗိုလ်ချုပ် ဆိုတာ လူညာသူပဲ။သူ တောင်တန်း တွေကို တက်လာပြီး ရှမ်းစော်ဘွာ ကချင် ချင်း အားလုံးကိုလဲ သူကမြူ ဆွယ်စည်းလုံး ပြီးလွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ခဲ.တယ်တဲ.။ပာင်. ရီချင်တယ် သူမလာခင်ကတည်း
ကငါတို. တိုင်းရင်းသား ရှမ်း ကချင် ချင်း ဒီလူမျိုးသုံးမျိုးပာာ စည်းလုံးပြီးသားပါ။၁၉၄၆ ၊ ၁၂ ပိုင်းကတည်းက ကချင် ချင်းရှမ်းတွေက ပင်လုံးမှာ အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီး နောက်နှစ် ၁၉၄၇ မှာ နောက်ထပ် လွတ်လပ်ရေးရဖို. အတူလက်တွဲ.ပြီး လုပ်ဆောင်ကြမယ်လို.ပြောကြတာ ။ ၁၉၄၇ ရောက်တော. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ခေါ်လာတာ လင်းခေးက ဦးထွန်းမြင်. တို.အဖွဲ.။ပင်လုံမှာ ကချင် ချင်း ရှမ်းတွေ အစည်းအဝေးလုပ်တော. ဗိုလ်ချုပ်ကတက်လာတယ်။အဲအချိန်မှာ ကချင် ချင်း ရှမ်းတွေက စည်းလုံးပြီးသားပါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အပေါ်ယံကနေပြန်ပြီး အချောသပ်ပေးတာပဲရှိတယ် သူဘာတွေလုပ်ခဲ.လို.လဲ။ရှင်းရှင်းပြောရင် ငါ လဲရှမ်းတစ်ယောက်ပဲ အဲတုန်းက ရှမ်းစော်ဘွားတွေက နည်းနည်း ( အာ) တယ်ဒီ စ၀်စံထွန်း ခေတ် မရောက်ကတည်းက ဗမာနဲ.ရှမ်းပာာ ရန်သူပဲ လုံးဝမတည်.ဘူး။
အဲတုန်းက ကျွန်တော် မြန်မာ ယိုးဒယား ဗမာကျောင်းအခြေခံကျောင်းတက်တုန်းကဘ၀ပေါ. ကျွန်တော်က သမိုင်းနဲ.ပတ်သက်လာရင် အရမ်းစိတ်ဝင်စားတာ အဲမှာ တစ်ခုထူးဆန်းတာမြန်မာယိုးဒယားထဲမှာ ကချင် ချင်း ရှမ်း ဗမာ စသဖြင်. တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပေါ.နော် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော. ဗမာလက်အောက်ရောက်သွားလို.လဲ နားကိုမလည်ဘူး။၁၉၄၇ မတိုင်မိတုန်းကရှမ်းစော်ဘွားတွေက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်.ရှိခဲ.တယ်။ကိုယ်ပိုင်
ဘုရာ ထီးနန်း နန်းတော်ရှိခဲ.တယ်။အင်္ဂလိပ်လက်အောက်နေခဲ.တုန်းကလဲ ဗမာပြည်နဲ. ရှမ်းပြည် က ခွဲခွဲခြားခြား အုပ်ချုပ်တယ် မရောဘူး ဗမာပြည်လဲ ဗမာပြည်သပ်သပ် ရှမ်းပြည်လဲ ရှမ်းပြည်သပ်သပ် အုပ်ချုပ်ချင်းလဲမတူဘူး အဲချိန်ကစပြီးတော. ကျွန်တော်တို.ရှမ်းလူမျိုးတွေက Federalism System စနစ်တောင်ကျင်.သုံးနေပြီ ဗမာပြည်ကြတော. ဒိုက်အာခီ အုပ်ချုပ်ရေးကျင်.သုံးတာ အဲချိန်ကစပြီး ဗမာလူမျိုးက ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာ အချင်းချင်း ရှမ်းပြည်ထဲက မျိုးနွယ်တွေ ရန်ဖြစ် သွေးခွဲအောင်လဲ သူတို.လုပ်ခဲ.ပြီးပြီး အဲတုန်းက ငါတို.ရှမ်းပြည်က Federal စနစ် အဲဒါကို ဗမာအစိုးရတွေက ပဒေသရဇ် လို.ခေါ်ဝေါ် တာ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အဲလိုအသံထွက်သွားတာလဲမသိဘူး အဲဒါကိုလဲ ရှမ်းလူမျိုးစော်
ဘွားတွေကလဲ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်နဲ. အတူလွတ်လပ်ရေးရအောင်ပူပေါင်းသလဲ မသိဘူး ခေတ်အဆက်ဆက် ဗမာတွေက ငါတို.ကိုသွေးခွဲအောင်လုပ်တယ် စော်ဘွားအုပ်ချုပ်တာကိုမကြိုက်ဘူး မကောင်းဘူးဆိုတာလဲ ဗမာတွေပဲ ရှမ်းမျိုးနွယ်တွေကိုလာသွေးသွေးခွဲ.တာ။ကယ်အခုကြည်.ပါလား သူတို.သေတာသေသွားတာ ရှမ်းစော်ဘွား
စ၀်စံထွန်းတို. ပင်လုံစာချုပ်မှာ ချုပ်ဆိုခဲ.ကြတယ် ။အဲကတည်.က ရှမ်းလူမျိုးသည်ဘယ်သူ.လက်အောက်မှမနေချင်ဘူးအဲဒါကြောင်. ဗိုလ်ချုပ်နဲ.အတူ လွတ်လပ်ရေးရအောင်
လုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ.တယ်။ကယ်လွတ်လပ်ရေးရတော်လဲ ဗမာအစိုးရလက်အောက်ရောက်သွားရော ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားတွေက။ခေတ်အဆက်ဆက် ရှမ်းလူမျိုးမျိုးနွယ်များ ဘာတွေ ကောင်းကျိုးခံစားခဲ.ရလို.လဲ။လွတ်လပ်ရေးရသွားတော်လဲ ဘယ်ကောင်ကမျက်နှာရသွားသလဲ ဒီစောက် ဗိုလ်ချုပ်ပဲ မရသွားဘူးလား။အခုချိန်အထိပဲ ရှမ်းလူမျိုး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေက တောင်းတောင်းဆိုနေကြတဲ. Federalism System မူဆိုတာကိုကော် ဖြစ်လာနိုင်မလား။ငါတို. တိုင်းရင်းသားတွေက နိုင်ငံရေး ပွဲထဲမှာ လှည်.
ကွက်တွေ သိပ်မရွှေ.တတ်လို. ပြီးတော. မကစားတတ်လို. ရိုးလဲရိုးသားတယ်။ကိုယ်ရိုးသားတယ် ကိုယ် တရားမျှတ တာပဲ လုပ်ဆောင်ခဲ.တာ လူများကိုမလိမ်ခဲ.ဘူး။ တစ်မူရှိလို တစ်ပဲလှူ ဆိုရိုးစကားလိုပဲ ကျွန်တော်တို.ရှမ်းမျိုးနွယ်တွေအားလုံး။ငါသည် ရှမ်းလူမျိုးစစ်စစ်ပါ ဗမာသွေးမပါပါ ဗမာ အစိုးရ ကိုအရမ်းမုန်းသည်။အခုချိန်အထိတိုင်း ရင်းသားနဲ. အပစ်အခေတ်ရပ်ဆဲ. လုပ်ဆောင်နေတာကို ကျွန်တော် လုံးဝ ယုံကြည်မူမရှိပါဘူး။ဘာလို.လဲသိလား သူတို.မျက်နှာကိုပဲကြည်.လိုက်ပါ ရိုးသားတဲ.မျက်နှာမပာု
တ်ဘူး လိမ်ညာတဲ. စောက်ခွက်တွေပဲ။စောက်ချိုးကိုမပြေတာ စောက်ဗမာစစ်အစိုးရ ကငါပဲ ဗမာအစိုးရမုန်းတာ မပာုတ်ဘူး တိုင်းရင်းသားတိုင်းပဲ အေ ကုန်အောင်ပြောလိုက်မယ် ဗမာလူမျိုးတောင်မှာ ဗမာအစိုးရ လုပ်ဆောင်မူကိုတောင်မကြိုက်ဘူးဆိုမှတော.။ သူတို.မျက်ခွက် မှန်ထဲမကြည်.ဖူးလို.နေမှာပေါ.။ဒီစစ်အစိုးရ ရှိနေသရွှေ. အေးချမ်းမှာမပာုတ်ပါ တိုင်းရင်းသားလဲ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်မူရှိချင်တယ်။ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မူကိုဆိုလိုချင်တာမပာုတ်ပါဘူး ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင်. ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင်.ပါ။ခွဲထွက်ဖို.ပြောတာမပာုတ်ဘူး။ ဥပမာ-တစ်ခုပဲပြောတော.မယ် ကိုယ်.လယ်တောင် ကိုယ်.မြေတောင်မှ ပြန်ငှားစားပြီး ပြန်လုပ်ရတဲ.ဘ၀ဖြစ်နေတယ်။အခွင်လဲ မတရားကောက်။
တစ်မိနစ်ဆို သန်းပေါင်းများစွာဝင်တယ် ဒီပဏ္လာရေးဝန်ကြီးတွေက။တကယ်အောက်ခြေ လူတန်းစားကြတော. တစ်နေ.ကို သုံးထောင်ရဖို. မလွယ်တာ။အဲကြောင်. ဒီနေ.ငါပြောချင်တဲ.အကြောင်းက အဲဒါတွေပဲ ဗမာအစိုးရ ကခိုင်းတဲ. အတိုင်း ငါတို.တိုင်းရင်းသား သတိထားဖို.လိုတယ်။သမိုင်းကို သမိုင်းမှာ ထားခဲ. ဆိုတဲ. စကားက ပြောတာလွယ် တယ် မေ.ဖို.တော.မလွယ်။ငါတို.မျိုး ရိုး သွေးမြေပေါ်ကျပြီး သေဆုံးသွားတာလဲ မနည်းတော.ဘူး အဲကြောင်. ဘယ်အရာတွေမဆို မျက်လုံးနှစ်လုံးစလုံးကို ပွင်.ပွင်.လင်းလင်းမြင်အောင်ကြည.်ကြပါလို. နိဂိုန်းချုပ်ရင်းနဲ. ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်ပါတော.မည်။
>>> Thank You. You Come read and Visit kha <<<